Wasiirka Qorshaynta iyo iskaashiga Caalamiga Soomaaliya | allsanaag
Wasiirka Qorshaynta iyo iskaashiga Caalamiga Soomaaliya
Aqoonyahan Faysal jaamac loo badinyo inuu noqdo Wasiirka Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga Dawladda soo socota ee Soomaaliya yeelan doonto.
Aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ka soo jeeda degaanada Puntland Faysal Jaamac, ayaa loo badinayaa inuu noqdo Wasiirka soo socda ee Qorshaynta iyo iskaashiga Caalamiga Soomaaliya ee dawladda R’aisawasaare Xasan Cali Kheyre
Faysal, ayaa ka soo jeeda gobolka Mudug, Puntland, in badana ku noolaa magaalada Edmonton, gobolka Alberta ee dalka Canada. Intuu joogay Magaalada Edmonton Faysal wuxuu maareeye guud ka noqday mid ka mid ah Shirkadaha ganacsiga ee ugu waaweyn dalka Canada oee lagu magcaabo Loblaws. Loblaws ayaa dalka Canada ku leh in ka badan 2000 oo Suuqyada waaweyn supermarket.
Faysal sida la sheegay, maanta magaciisu wuxuu yaalaa xafiiska Ra’isawasaaraha Soomaliya , Sababtoo ah waa aqoonyahan aad ugu fiican ganacsiga iyo xiriirka Calaamaiga. Waana sababta loogu badinyo inuu noqdo wasiirka Qorshaynta iyo iskaashiga Calaamiga.
Faysal xilkan wasiirnimada waxa kula tartamaya , Cali Xaaji oo horay uga mid ahaan jiray ururka Alitixaad. Markii danbena wasiir u noqday madaxweyne Gaas markii ku guulaystay doorashadda Puntland . Inkastoo markii danbe xilka laga qaaday
← Reer Garowe maxaa ka maqan? Madaxweyne Gaas iyo Mucaaradkiisa →